Rano fisotro madio Fokontany 31 hametrahana ny “Water Service Point”
Ny « Water Service Point » dia fepetra iray natao hanampiana ny vahoaka amin` izao fahamehana ara-pahasalamana ho an` ny rano fisotro madio sy fanasana tanana.
Noho ny fiarahamiasa amin` ny UNICEF dia fokontany miisa 31 no hisitraka rano fisotro madio vokatry io tetikasa io. Ny rano mantsy dia tena ilaina indrindra amin` izao fiparitahan` ny aretina COVID-19 izao. Ankehitriny, sisiben-drano maherin` ny 120 isa no efa mamatsy ireo toerana sarotra hisitrahana rano ka ny orinasa JIRAMA no misahana ny faninjarana an` ireo sinibe ireo. Tanjona dia ho fanatsarana ny tolotra ataon` ny JIRAMA ho an` ny mpanjifany ary fisorohana ny vanim-potoanan` ny main-tany (période d` étiage). Toy izany ihany koa ny fepetra noraisina eo anivon` ireo “bornes fontaines » izay marihana fa tsy tokony hisy fisondrotam-bidy eny amin` izy ireny.